Famokarana mivantana ny entona vita amin'ny hoditra otrikaretina
Ny ban-tongotra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra an'i Bensen dia ekonomika ary ny akora vita amin'ny hoditra dia mora diovina ary mora esorina sy soloina.
Famolavolana volon-koditra vita amin'ny Microfiber for Auto
Ny anarana feno ny hoditra microfiber dia hoditra PU izay nohamafisin'ny microfiber, izay mifono fonosana PU miorina amin'ny lamba fototra misy microfiber.
Volon-koditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra microfiber matevina
Ny anarana feno ny hoditra microfiber dia "hoditra nohamafisina microfiber". Izany dia an'ny hoditra namboarina vao namboarina tamin'ny hoditra sentetika. Anisany karazana hoditra vaovao izy io. Izy io dia misy fanoherana ny abrasion, fanoherana ny hatsiaka, fahamaivanana, fanoherana ny fahanterana ary endrika malefaka. Fiarovana ny tontolo iainana sy fisehoana tsara tarehy, io no safidy tsara indrindra hanoloana ny hoditra voajanahary (volon'omby voalohany), ankehitriny dia orinasa maro no hivarotra hoditra microfiber ho toy ny sosona omby voalohany amin'ny vidiny lafo.
Microfiber beige fiara Premium izay mahatsapa toy ny hoditra
Ny hoditra Microfiber PU, mampiasa nylon ho an'ny farany ambany ary ny polyurethane ho an'ny sosona ambony, dia hoditra vita amin'ny volon-koditra avo lenta, manome karazana loko mihoatra ny roapolo ho safidin'ny mpanjifa izahay.
Haavo avo amin'ny herin'ny hoditra azo sambo-belona Microfiber PU hoditra
Ny anarana feno ny hoditra microfiber dia "hoditra nohamafisina microfiber". Izany dia an'ny hoditra namboarina vao namboarina tamin'ny hoditra sentetika. Anisany karazana hoditra vaovao izy io.
Volon-koditra Microfiber miady amin'ny lokony maro sy marefo
Ny anarana feno ny hoditra microfiber dia "hoditra nohamafisina microfiber". Izany dia an'ny hoditra namboarina vao namboarina tamin'ny hoditra sentetika. Anisany karazana hoditra vaovao izy io. Izy io dia misy fanoherana ny abrasion, fanoherana ny hatsiaka, fahamaivanana, fanoherana ny fahanterana ary endrika malefaka. , Fiarovana ny tontolo iainana sy fisehoana tsara tarehy, io no safidy tsara indrindra hanoloana ny hoditra voajanahary (cowhide sosona voalohany), ankehitriny dia orinasa maro no hivarotra hoditra microfiber ho toy ny sosona omby voalohany amin'ny vidiny lafo.
0.6mm - 1.4mm Microfiber hoditra sentetika ho an'ny hoditra Upholstery automotive
1.2mm mikrofiber hoditra ho an'ny fiara, miaraka amina tànana malefaka sy tsara amboniny. Milanja maivana, 30% maivana noho ny hoditra voajanahary, mahafeno ny fangatahana famolavolana lanja mavesatra sy toekarena solika.
Ny hoditra mahery vaika manohitra ny lozisialy Napa Microfiber legioma fiara ho an'ny seza fiara
Ny hoditra microfiber an'ny fiara dia ambony noho ny hoditra voajanahary amin'ny lafiny fitoviana, ny tanjaky ny ranomaso, ny famirapiratan'ny loko ary ny fampiasana amboniny, izay nanjary fitarihan'ny hoditra synthetic ankehitriny miaraka amin'ny fahombiazany tsara, fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy poizina, tahan'ny fampiasana avo.
Fametahana mora ny Universal Auto Cover seza hoditra
Saron-seza fiara araka ny ilazan'ny anarana azy dia ny fonon'ny seza fiara, ny fonon'ny seza hoditra dia afaka miaro ny seza fiara tany am-boalohany ho maina sy madio, hisorohana ny anjara asan'ny hoditra antitra.
Hoditra Microfiber Auto avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
Ny hoditra microfiber an'i Bensen dia misy fanoherana avo lenta, fampiononana ary tanjaka mihombo. Satria Bentham dia manana orinasa misy azy, dia afaka manolotra vidiny mifaninana bebe kokoa sy vokatra avo lenta kokoa. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny vokatray, azafady mifandraisa aminay.
Eco-friendly Automotive Microfiber hoditra ho an'ny fitaovan'ny fiara
Ny hoditra microfiber an'i Bensen dia misy fanoherana avo lenta, fampiononana ary tanjaka mihombo. Koa satria manana ny ozininy manokana i Bensen, dia afaka manolotra vidiny mifaninana bebe kokoa sy vokatra avo lenta kokoa. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny vokatray, azafady mifandraisa aminay.